.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Desktop Snow Portable Software
Desktop Snow Portable Software
သူငယ်ချင်းတို့ ကွန်ပျူတာ Desktop မှာ နှင်းလေးတွေနဲ့အလှဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်
ဒီ software လေးသုံကြည့်ပါ။ နှင်းလေးတွေတင်မကဘူး သစ်ရွက်လေးတွေရော ကြယ်လေးတွေရော
ပန်းပွင့်လေးတွေရော အကုန်ကျလို့ရပါတယ်။ software လေးဖွင့်ပြီး နည်းနည်းကလိကြည့်ပေါ့။
portable လေးဖြစ်တဲ့အတွက် size လည်းသိပ်မကြီးပါဘူး။
သုံးချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ကလင့်မှာ ယူလိုက်ပါ။
Download : Desktop Snow
Posted by FlashSongCrazy at 08:01